Mepụta ụlọikwuu ọhụrụ - China Green Camping Products
Tupu ị rụọ ụlọikwuu, ị kwesịrị ịma ihe ga-abụ ụlọikwuu a na ụdị ebe a ga-agba ụlọikwuu, dị ka maa ụlọikwuu, ịrị ugwu, osimiri, agha, ma ọ bụ dịka ebe anwụ dị, ka a na-eji ebe a na-ajụ oyi ma ọ bụ na-ekpo ọkụ Mpaghara a na - enwe oke ikuku na mmiri ozuzo, enwere ikike obula. Mgbe ahụ ị nwere ike ịmalite ịmepụta ụlọikwuu.
N'ebe a, anyị ga-ewere ụlọikwuu igloo dịka ọmụmaatụ. Tentlọikwuu a bụ maka ahịa ndị Germany maka ebe a na-ama ụlọikwuu. Ọ kwesịrị ịdị mma maka mmadụ atọ, ịtọlite ​​ngwa ma mechie ya, kwesịrị ịrụ ọrụ maka otu izu ụlọikwuu, ọ kwesịrị ịnweta oghere maka rucksack, akpụkpọ ụkwụ na ngwa. Mgbe ahụ anyị ga-eso n'okpuru usoro n'okpuru.
Dabere na ISO5912, onye ọ bụla kwesịrị inwe oghere gburugburu 200 x 60cm, mmadụ 3 ekwesịghị ịbụ ihe na-erughị 200 x 180cm. Dika onye Germany buru ibu karia ndi kwesiri, anyi kpebiri iha 210 x 200. Ogo ya di elu dika 120-140cm maka igloo tent, anyi ekpebie 120cm, dika ogha kwesiri ibu ihe 20cm ga etinye aka. Iji nweta ohere maka rucksack na ụfọdụ ngwa, anyị bu n’obi inwe vestibule gburugburu 80-90cm n'ọnụ ụzọ. Ugbu a, anyị nwere ike ịmalite ime sket. Ọtụtụ n'ime ndị na-emepụta ụlọikwuu nwere ngalaba ọrụ afọ.
Mgbe emechara, onye mmebe ahụ ga -eme efere ahụ dịka sket si dị. Afọ iri gara aga, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-arụ n'ụlọikwuu na-eji efere n'aka, mana ugbu a, ọtụtụ n'ime ndị na-eweta ụlọikwuu na-eme efere site na sọftụwia.
Buru ụzọ dọọ efere ahụ, wee bee akwa ahụ dabere na efere ahụ.
deputa efere ulo-ikw.
Hụ nyocha mbụ.
Nhazi usoro nlele ma lelee ma ọ dị mma ma ọ bụ nwee nkwalite ọ bụla, ọ na-adịkarị mkpa ịlele ụkpụrụ, nha, etiti, ihe owuwu, setịpụ ma mechie ọkwa a. Ọ bụrụ na ihe niile dị mma, mgbe ahụ were ụlọ na klọọkụ mechie ikpeazụ. Ọ bụrụ na ihe ọ bụla mkpa inwe megharịa, bee ákwà na-eme ka 2 nd , 3 Rd , 4 nke ... agbalị sample ma nyochaa ọzọ. Dika a choro idozi ma mechie ulo-ikw quick a ngwa-ngwa, anyi na-ahuta ukpa dika otutu.
Mgbe emechara nyocha ihe nlele ahụ, werezie akwa dabara nke ikpeazụ, jiri akwa na ngwa ndị ọzọ, dị ka osisi ụlọikwuu, eriri ikuku. N'ihi ụlọikwuu a bụ maka ebe a na-ama ụlọikwuu maka ọ dịkarịa ala otu izu n'èzí, anyị na-ekpebi ịnwe akwa kọlụm mmiri dị elu ma kpoo akwa ahụ. Wee mee nnwale ahụ dabere na gburugburu ebe ịchọrọ iji. Dị ka mgbochi mmiri, nguzogide ikuku, mgbochi UV, nguzogide eriri-akpa, arụmọrụ ikuku, ikike ibu…
N'ebe a, ọ bụ usoro nkịtị maka ịmepụta ụlọikwuu ọhụrụ, ewezuga okwu ndị dị n'elu, enwere ọtụtụ nsogbu ndị ọzọ ọ dị mkpa ka echebara echiche, dịka nha nha, nha mbukota, ogologo oge, mkpuchi mmiri, nchekwa, iwu chọrọ na mba nke njedebe njirimara. . Ọ bụrụ na ụlọikwuu ahụ bụ maka ndị agha, dị ka ụlọikwuu ndị agha anyị mepụtara maka onye otu NATO, nke bụ ihe gbagwojuru anya nke kwesịrị ịtụle ọtụtụ ihe ma lelee ọtụtụ ihe.
Oge nzipu ozi: Jul-25-2020